Iihotele ezinamaxabiso aphantsi-Injini yokukhangela yeehotele ngazo zonke iziqinisekiso!
Ezi ujonge ihotele enexabiso eliphantsi kwindawo ethile ehlabathini? Enkosi kwindawo yethu onokuyenza fumana ihotele oyifunayo ngexabiso eliphantsi kwi-intanethi kunye nazo zonke iziqinisekiso.
Ixabiso eliphantsi lokukhangela iihotele
Ngokusebenzisa injini yokukhangela yehotele yangaphambili fumana ihotele oyifunayo kwaye ugcine umbulelo kumaxabiso ethu amahle. Ukuyisebenzisa kulula kakhulu, kuya kufuneka ubonise indawo oya kuyo apho ujonge khona ihotele, umhla wokungena nokuphuma ehotele kunye nenani labantu kunye / okanye amagumbi owafunayo, ucofe iqhosha lokukhangela kwaye yiyo loo nto. Ukusuka apho injini yethu yokukhangela iya kwenza umlingo oyimfuneko ukuze ufumane ifayile ye Elona xabiso liphezulu kuyo yonke i-intanethi. Yintoni elula?
Xa ucinga ngokulungiselela iholide elungileyo, kuya kufuneka unike ingqalelo amanqaku amaninzi ukuze uwaphumeze. Enye yezona zinto ziphambili kukukhangela indawo yokuhlala. Ngaphakathi kuyo sikhetha ukujonga iihotele ezingabizi kakhulu. Kuba kuzo unokufumana ezona meko zibalaseleyo ngaphandle kokuchitha imali eninzi. Fumanisa yonke into oyifunayo ukuze ufumane loo hotele yamaphupha akho ngendlela elula! Ukuba ufuna ukufumana elona xabiso lifanelekileyo unalo Cofa apha.
1 Ixabiso eliphantsi lokukhangela iihotele
2 Izibonelelo zokubhukisha iihotele kwi-intanethi
3 Ungayibhukisha njani ihotele kwi-intanethi
4 Fumana iihotele ezingabizi kakhulu
5 Ukuphononongwa kweehotele
Izibonelelo zokubhukisha iihotele kwi-intanethi
Enkosi kwinto yokuba i-intanethi ingene ebomini bethu, sele ilula kancinci. Kakhulu kangangokuba for cwangcisa uhambo, akusafuneki ukuba sisuke kwisofa yethu. Siya kukuphepha ukulinda ixesha elide kuyo nayiphi na iofisi yokuhamba okanye emnxebeni. Kodwa ayizukukwazi ukugcina ixesha kuphela, kodwa siya kuba nakho nokubala amaxabiso amahle kakhulu kuthi ukuhamba kwi-Intanethi. Kukho amaphepha amaninzi anikezela ngezaphulelo kunye nezibonelelo ezininzi xa ubhukisha iihotele kwi-intanethi, kuba akukho ndleko zithile zibhatalwa ziiarhente.
Amanani: Ngemfuno engaka, i Iidili zehotele nabo badala. Ukongeza, ukuba sijonga ngokusondeleyo, sihlala sigcina intwana engaphezulu kunokuba senza ugcino kwiwebhusayithi yethu. Kuhlala kucetyiswa ukukhangela iiwebhusayithi kwaye wenze uthelekiso olula. Fumana elona xabiso liphezulu APHA.
IntuthuzeloNjengoko besesitshilo, ayifani into yokuba siziveze kwi arhente yokuhamba kunokuhlala endlini yethu. Apha siya kuba nexesha elininzi kangangoko ukuze sikwazi ukukhetha indawo yethu yokuhlala kakuhle. Ungakhangela kwiwebhusayithi ezahlukeneyo kwaye wenze uthelekiso lwazo zonke iindidi zeehotele, zombini izibonelelo zazo kunye nezinto ezingalunganga kwaye ngaphambi kokubeka unyawo kuyo.
Ukufumaneka: Noba kutheni ulubeka nini ixesha ubhukisho. Iiwebhusayithi zihlala zikulungele ukuyamkela, nokuba kusekuseni okanye ukuba uthatha isigqibo ebusuku.
Isiqinisekiso: Kwimizuzwana nje embalwa, uya kuba sele unesiqinisekiso sokubhukisha okuthethiweyo. Oko kukuthi, i isiqinisekiso kwangoko iya kuba lolona khuseleko lwakho. Ngayo, akusekho kuphinda kwenzeke iimpazamo, ngokuchaseneyo. Uya kuba negumbi lakho kwi-inshurensi kwihotele ekhethiweyo.
Ungayibhukisha njani ihotele kwi-intanethi
Ngoku ekubeni sisazi izibonelelo ezilungileyo zokufumana iihotele nge-intanethi, siza kuhamba inyathelo elinye. Ngaba uyazi ukuba ubhukisha njani ihotele kwi-intanethi?. Ikwayenye yezona ngongoma zilula esinokuzenza ngaphandle kweengxaki ezinkulu. Sifuna i umfumani wehotele, esiza kuyifumana kwiphepha. Yifom elula apho ungazukucelwa ulwazi lwakho lomntu, kodwa indawo oya kuyo apho ufuna ukuya eholideyini. Ukongeza koku, kuya kuba lula kuwe ukuba ukhethe zombini iintsuku zokufika nezokuhamba. Nje ukuba kwenziwe oku, kuya kufuneka sikhethe igumbi ngokwabantu.
Xa sigcwalise ulwazi oluhambelanayo, kufuneka sicinezele iqhosha "ukukhangela" kwaye liza kusishiya zonke ihotele kunye neendlela ezikhoyo zokufikelela. Ukuba ngeli xesha akukho Amagumbi asimahla, ungasoloko utshintsha imihla kwakhona kwaye ujonge iinketho ezintsha. Ngendlela efanayo, uluhlu oluneehotele ezininzi luya kuvela. Kulapho unokucofa khona nganye nganye ukuze ubone iimeko zayo, imifanekiso yamagumbi, indawo engqongileyo, njl.
Fumana iihotele ezingabizi kakhulu
Nje ukuba singene kuluhlu lweehotele, siya kufumana ezona zibonelelo zibalaseleyo. Kungenxa yokuba olona khetho lubalaseleyo luya kuhlala lubonakala lusenza ukuba uhambo lube nokufikeleleka kancinane. Sisoloko sicinga ukuba izisulu ziya kubonakala ngendlela yethu, kuba akukho nto ihambileyo kwinyani. Ukususela enkulu Izibonelelo ze zonke iihotele ezibandakanya wonke umntu ukuya kuthi ga kwibhodi yesiqingatha okanye ngesidlo sakusasa nje.
ImihlaImihla yile enokuthi ngamanye amaxesha inyuse iindleko zehotele. Siyazi ukuba kukho amaxesha aphezulu kwaye kuwo, amaxabiso ayenyuka. Kungenxa yoko le nto, okoko sinako, siya kuguqula iintsuku. Ayifani ukuhamba ngolwesiHlanu kunangoLwesine emva kwemini.
Imeko yendawoNokuba siyaphi apho siya khona, kuhlala kunokwenzeka ukukhetha iihotele ezingekho embindini. Ngale ndlela, siyaqinisekisa ukuba ixabiso liya kwahluka ngokupheleleyo. Khangela phakathi indawo yokuhlala kufutshane nezikhululo, nangona zisuswe kancinci kwindawo ephambili.
Ukubhukisha: Nangona eyona nto icace gca kukwenza i ukubhukisha kwangaphambili, ngamanye amaxesha ayinakwenzeka. Ukubhukisha kwangethuba kunokuba yonga kakhulu. Ewe kunjalo, namhlanje, sineehotele ezithile ezinikezela ngezaphulelo xa kukho amagumbi asimahla aseleyo. Ngalo lonke ixesha kufuneka unake kakhulu!
Xa sibhukisha, sihlala sifuna ukwazi ukuba senza into elungileyo na. Enye yeendlela ezilungileyo esinazo zoku, zezi uphononongo lwabathengi. Nangona beza kwahluka kakhulu, banokuhlala besinceda kancinci ukufumana umbono wento esiza kuyifumana. Okokuqala, ezo zimvo zihlala zihamba nenani. Iya kuba ngamanqaku anikwe iinkonzo ezahlukeneyo ihotele enayo.
Ukuba ungaphezulu kwe-6, singathetha ngeehotele ezinomdla kakhulu. Ewe ungasoloko uzivumela ukuba uthathwe ngabo banexabiso elincinci. Ngokulula, sicebisa ukuba ufunde ingxelo nganye kakuhle ukuze wazi amanqaku asezantsi kangako. Phakathi kwabaninzi ukalisho uya kuba nakho ukwazi ukuba ngaba inokucoceka okuhle kunye nentuthuzelo. Inkonzo kunye nobuhlobo nokuba ingxolo yenye yeendawo ezimbi okanye indawo leyo ayifanelekanga.
Kubalulekile ukuba ujonge kwifayile ye- amaxesha okufika nawokwamkela. Kuhlala kucetyiswa ukuba ezi ziiyure ezingama-24. Ngendlela efanayo, kuyakufuneka silungise zonke iinkonzo abasinika zona. Ngesi sizathu, kwaye ukunqanda isimanga, kufuneka ufunde ngononophelo yonke into. Nangona ukwenza konke oku kube mnandi, akukho nto ngathi isinceda ngokubonakalayo. Imifanekiso ikwalungile ukuxhasa izimvo kwaye isinike umbono opheleleyo wendalo esingqongileyo.
Njengoko sibona, kubo bonke abantu abazonwabisa, ukufumana izivumelwano zehotele kunye nokuququzelela iihambo kwi-Intanethi kukudlala komntwana. Nokuba ithatha ixesha elide, iya kuhlala iyonwabisa kwaye siyazi ukuba sisesandleni kwabanye iiholide zexabiso eliphantsi ongenakulibaleka.